musha NYAYA DZEEEOPEAN Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeInjini yeMidfield inonyanyozivikanwa neNickname; 'Bakoko'. Our Tiemoue Bakayoko Childhood Story pamwe ne Untold Biography chokwadi inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye vazhinji BUSA-Ita chokwadi pamusoro pake. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, Tanga Kutanga.
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Bakayoko akaberekerwa muParis muna 17 August 1994 kuvabereki vakatama kubva kuIvory Coast kuenda kuguta reFrance kuti vawane hupenyu hwakanaka.
Kungofanana nevakawanda vemaviri ake madema, iye weFrench- Ivorian nhaka. Paakanga achikura, aigara munharaunda yeBarès ine vanhu vakawanda vekuAfrica. Yaiva nharaunda muParis yakazivikanwa kare kare nekuda kwenhamba yavo yakawanda yevanhu vemadimusi vanobva kuAfrica kubuda.
Tiemoue Bakayoko achiri mwana achiona vabereki vake vachiita mabasa ese kunyengera mabasa kungoisa zvokudya patafura uye kutumira mari kune dzimwe mhuri dziri kuIvory Coast. Basa rakawanda rakanyanyisa sezvakaitwa panguva iyoyo rakaramba richitsvaga nevevanhu vemaAfrika, kunyange vakadzidza zvikuru. Kuenda kuchikoro kwakanga kusiri chinhu chikuru kune mukomana muduku.
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Akafuridzirwa neNdebe yeNyika
Kunge Sadio Mane, akawana akafuridzirwa mubhoza kuburikidza neFrance 1998 World Cup. Akatanga kushamiswa nekuona Senegal, muvakidzani wekumusha kwake (Ivory Coast) achibuda kunze kweFrance muchiteshi uye achiona France achidzika kuti anotaura kubwinya kwetambo.
Maererano naye, "Ndakanga ndakafuridzirwa neushingi hwevatambi vekunyama vechiFrench muchechi. Ndakanga ndiri munhu aida vadziviriri vakuru uye midzi yezvidziviriro. Iyo inofanirwa naPatrick Vieira, Lilian Thuram naMarcel Desailly ndivo vaindifarira. Basa ravo rakapisa basa rangu. Zvisinei, handigoni kutadza kutaura nezvaClaude Makalele uyo akaisa nheyo yezvandave ndava. "
Kufanana nevamwe vana vakawanda vemausi, dzidzo yakasimudzirwa kuBakayoko, akazoshandurwa nebhola pakarepo mushure meFrance 1998 yenyika. Vabereki vake vakanzwisisa kudanwa kwake uye vakapa vose rubatsiro rwaaida kuva nekutanga kwakakodzera. Vakamunyorera pabhokisi rebhora (Le club de football de PARIS 15) pazera re 5.
Bakayoko akaratidza huwandu hwakanaka hwekuchenjera paanenge achitamba nebhokisi pachikoro chake chekutanga chechikoro. Akanga ari pamusoro pemakore akaenzana pamudzidzi uye aiva pane imwe nguva korona sekanakisisa mwana webhokisi. Paris 15 yakamuchengetedza kwemakore mana (kusvika pazera remakore 9) asati abvumira vabereki vake kuti vatange shanduko kuenda kuchikoro chakanaka nezita -CA Paris Charenton. Akangotamba gore rimwe chete kuCharenton asati aita imwe kuenda Montrogue FC 92. Pachikwata ichi, anosangana nechinetso chisingaverengeki, waterloo.
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Kutambura
Sezvo mutambi wechiduku (age 10) paanenge achitamba kuMontrogue FC 92, Bakayoko akatambura gumbo rakaputsika kuburikidza nezvaainzi 'chakaipa chinetso' kubva kumuvengi. Kuoma kwekukuvadzwa kwakakonzera kuti nguva refu inopera mubasa rake duku.
"Pane imwe nguva ndakaona basa rangu duku richiuya pakarepo". Yaiva nguva yekutambudzika kwakasimba kwandiri. My nzira yekudzosa yakanga ichinonoka uye yakandiona ndichipedza makore anoda kusvika 3 ndisina kutamba bhora " anodaro Bakayoko.
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts:kuramba
Mugore re2008, kuzorora kwakakwana kubva kune distal humerus kuputsika kwakasimbiswa. Akanga ari makore 13 chete panguva iyoyo. Akamirira kwemavhiki mashomanana kuti aone kupora kwakakwana asati asarudza kwaakasiya mubasa rake. Zvinosuruvarisa hapana kambani yakamutora nekuda kwekurasikirwa kwefomu. Akatambura kurambwa kunyange kubva kumapurisa ake akapfuura.
Yaiva yepamusoro yebhobho reRennes iyo yakazomupa mukana wekuwanazve fomu yake mushure memafungiro akawanda nevatungamiri. Vakarangarira chokwadi chokuti akambotaridzika zvikuru mumakwikwi ake ekare. Izvi zvakaitika muna 2009 apo aingova nemakore 14 yemakore.
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Kutevera Makalele's Footsteps
Achitevera nguva yake yekutanga mbiri kuMonaco, umo maakaita 31 Ligue 1 maitiro, Bakayoko akasarudza kuchinja maitiro ake kuti azadzise zvaaigona. Vose vanovonga kumudzidzisi wake, Claude Makalele uyo akasarudzwa semutungamiri weMonaco teknolojia munaJanuary 2016.
Basa ra Makalele kuBakayoko
"Makélélé akandibatsira zvikuru. Paakazosvika ku Monaco ini ndakanga ndisiri, mutambi akanaka kwazvo, asi ndaive nehurukuro dzakawanda naye. Akandipa mazano akawanda uye akandidzidzisa kuti ndingatamba sei maitiro angu ebhora kupfuura zvishoma. Akatotendera ini kuti ndimudane kuti awane rubatsiro rwakawedzerwa. "
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Kukurumidza Kukura
Hazvina kutora kwenguva yakawanda asati aona kuti aigona kuzvichengeta pachake kubva panzvimbo yacho. Pakazorora, akazova mutambo wenguva dzose kuMonaco, achibatsira boka racho kuti rikunde mutemo 1 mumutambo we 2016 / 2017. Haana kungozviisa pachake sechikamu chakakosha cheboka raMonaco nemitambo yakasimba, aive nemakukutu mashomanana uye kushanda kwake panguva yekurovedza kwakanga kusisina kutsoropodzwa.
Nhasi, Bakayoko akazopedzisira akura. Akaisa kushamwaridzana kwesimba uye maonero ari pakati pepakati pepakati kusvika kushandiswa zvakanaka.
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Chimiro cheMutambo
Bakayoko yakafananidzwa ne Yaya Touré nekuda kwesimba rake rose rakadzika maitiro, kuverenga kuchenjera kwemutambo, kukwanisa kubvisa kupfuura uye kugadzirisa kushanda, kupfuura uye kuputika. Unhu hwake hunonyanya kukosha ndehupenyu hwake uye kutamba.
Ndiye muongorori mubasa rekudzivirirwa mukati. Kukwanisa kwake kuputsa kurwisana nekuita kufambisa mberi kumhanya kwaingova chete vatambi vaviri (Gabi naDanny Drinkwater) vakawana zvakawanda muzana re 2016 / 2017 svondo.
Bakayoko's mananger kuMonaco, Leonardo Jardim, imwe ikati: "Anokunda mabhora mazhinji, anounza kuenzanisa neboka. Anodarika bhora zvakanaka uye anowedzera maruva ake. Icho ndicho chikamu cheBakayoko. Ndiye mutauriri akakwana, kuvapo kwemitambo yakakosha, iye akanaka pakudzoka uye kutora zvinangwa zvinotyisa. "
Pamusoro pezvinhu zvose zvaainazvo, kuoma kwaBayoko uye kunetseka kuri kumusoro uko uye iyo ndiyo nzvimbo yake yekutengesa.
Vanhu vakawanda vakabvunza kuti nei achipfeka maski? ... Iye zvino tinokupai mhinduro.
Bakayoko akambovhuna mhino dzake mukurovedza mumhanyi-kusvika kuMicaco's Champions League semi-final yekutanga neJuventus.
Haana kurega izvozvo zvichitadzisa kubva pakurwisana nemaItaly, uye akasarudza kupfeka chidziro chakasvibirira chechivara chenyama chakamupa mhepo yeSahero Hero uye musoro we 'Dark Knight'.
Bakayoko achiri kunzwa marwadzo mumabvi ake ainge aputsika akasiyiwa. Sezvakanyorwa pamusoro apa, akakunda rurefu rurefu rwakatsetseka nerutsoka rwakaputsika semucheche.
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Kubva ku pinki kusvika kuchitema (Chikamu 2)
Achiita zvakaipa, Bakayoko akawana huwandu hwekuchinja mune mararamiro ake Akasangana nemunhu wekare wekuFrance ainzi Claude Makalele. Akashandura kubva pakugara akaenzana kune dapper anotarisa.
Mazuva ano, anogadzirisa, zvose zviripo uye zvisingabvi. Chimwe chinoshamisa che 1.84m, haasi kupera violet kana ichiuya pakuonekwa kwake, ichipfeka bvudzi rake rose rimwe zuva, blonde rinotevera.
Paakazosvika ku Monaco mu2014 aigona kuonekwa achibuda kubva kumafambi eimba yepamusoro mushure megwenzi re pink Porsche Cayenne.
Bakayoko kamwe akashandura marara ose emotokari dzake kubva ku pinki kusvika kuchitema. Uyezve, akatanga bhoja uye akachinjawo kudya kwake uye akavandudza simba rake.
Asi mushure mokunge gungwa richinjwa mune mafungiro, rakakonzerwa nemudzidzisi wake wekare mudiki kuRennes, akaisa chivako cheimba yacho kune imwe imba yakaderera uye akawana Cayenne ainyorovesa dema. Akatsanangura kuti: "Vaive vachitaura kuti ndaida zvinhu zvakanaka muupenyu, kuti ndakanga ndisisiri ganda, kuti ndauya (kuMonako) chete nokuda kwebhadharo yakakwirira, iyo yakanga isiri iyo."
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Whats in His Number?
Bakayoko akatamba nhamba ye14 pajersey yake kuMonaco. Akasarudza iri mubhadharo kuenda kuCondorthment (14th district) muParis apo akaberekerwa nevabereki veIvory pa 17 August 1994, uye achapfeka nhamba imwe chete yeCentre.
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Deschamps fan
Mutungamiri weFrance Didier Deschamps ari nhengo yakakwana yekubhadhara yeBakayoko social appreciation.
Mutungamiri weChina Cup weChNUMX Cup anoziva chinhu kana maviri pamusoro pezvivako zvinopinda pakuita mutambi mukuru. Akadana Bakokoko kuti adzoke neFrance squad vhiki mushure mekuita basa rake mukudarika kweManchester City kubva kuEurope. Deschamps akabva ati: "Ndizvo vane simba, inobatsira, inoita zvinangwa zvinosarudzira, inoita zvinangwa uye inofadza zvikuru-yose. "
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Musoro Wake Wakagumburwa Guta
Chero nguva ipi zvayo Manchester City ichasvika kuStamford Bridge kuti ione Bakayoko vachitamba, ivo vachangozivawo kukanganisa kwaanogona kukonzera. Kuvonga munhoroondo.
Kudzoka muna March, musoro wake wakanakisisa 13 maminitsi kubva panguva yakarambidzwa Pep Guardiola's City kune rimwe rinorwadza Champions League yekupedzisira-16 kubva kune zvinangwa zvishoma. Guta rakauya mune hutungamiri mukutonga kwechiremba mushure mekukundwa kwegumbo re 5-3. Uye neCNUMX maminitsi kuenda, vakange vari 19-6 mberi, chete nokuda kwaBakayoko kudzokera kumba kwekuchekwa kwemasimusi Thomas Lemar kuti ape Monaco kukunda. "Iko mufaro mukuru wokupinza mukati Champions League. Handina kutarisira izvi, " akati.
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Sei chikwata cheChristian FC chakamuisa
Ichokwadi chinotaurirwa. Vakamuba kubva pazvirongwa zvaMourinho. Mumwe anokosha akamuda nokuti anosangana nemashoko ake. (Simba, Simba uye Rinokurumidza).
Chikonzero nei Chelsea yakasaina Bakokoko
Tiemoue Bakayoko akasarudza Chelsea panzvimbo yeManchester United nokuti anofarira Antonio Conte kuna Jose Mourinho. Akatotadzisa kudana kubva kuChinhu Chakanaka chakamuita kuti aore mwoyo.
VaBakayoko vakati panguva yaakasvika kuCentre: "Zvakanga zvisingashamisi kuti Mourinho andiidze, kunyange zvazvo ndakanga ndakanyeverwa kuti aizonditendera sei nenzira yakanyanyisa. Ndakateerera mazano ake pamusoro pokuti nei ndaifanira kuenda kuUnited. Haana kumboziva chimwe chinhu, ndakakurira kutarisa Chelsea kwete naye. Kunyora kuCentral kwaiva chinhu chechisikigo kwandiri nokuti iri kambani yandakaida zvikuru muhuduku hwangu. "
Sei Mourinho Akarasika Bakayoko
Zvichida chimwe chikonzero chekukakavadzana kwakanyanya pakati paJose Mourinho naAntonio Conte.
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Kusvika Chelsea kune Private Jet
Tiemoue Bakayoko akamuka Chelsea vateki vaifara nokutumira mifananidzo yekuti iye pachake ari kupinda jet yega yega yakanga yakatemerwa kuti iende kuLondon ichibva kuFrance. Iyi jet yakamutora kuLondon kuti inobatana neBlues. Uku ndiko kushanya kwake kuti aende kuchipatara uye aine chibvumirano neCentral.
Bakayoko akapinda jet pachake kuCentral FC
Akaenda nemufananidzo wacho nemashoko: "Ndege, Ngatitii ... Ndava nevhiki yakanaka neChristian FC" inofambidzana nepane ndege emojis.
Adrien Rabiot Urubhabhatidzo Mubhuku Plus Untold Biography Facts